Ihe ngwanrọ iji merie roulette na eserese na-ewu ewu
Roulette Trends Hunter bụ ngwanrọ iji merie roulette na ntanetị na eserese eserese, ya bụ, ọ na - enye gị ohere ịchọpụta ohere ndị na - eso -emekarị iji gbalịa ime ihe kachasị nke ịga n'ihu.
Tupu ịga n'ihu na-echeta nke ahụ ThatsLuck I nwekwara ike ịchọta ọdịnaya n’efu, ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ na-emelite n’ akwụkwọ debanye na ọwa anyị na on YouTube.
Mmeri na roulette: ọdịiche ma ọ bụ nguzozi?
Otu nkebi ahịrịokwu m nụrụ kemgbe ọtụtụ mgbe m malitere inwe mmasị na ọnọdụ nke roulette ohere bụ: na roulette iwu bụ ọdịiche ahụ, nguzozi bụ ewezuga!
Ọ bụ echiche ọtụtụ ndị egwuregwu na - ekerịta - ọbụlagodi ndị na - abụghị ndị mbido - na ọ bụ ruleti amalite na-emepụta a ọdịiche na a akpan akpan ohere, ọ bụ n'ezie ihe kwesịrị ekwesị ịnọgide na-eso ndị -emekarị kama igwu egwu ma nke a gosiputara site na tebụl gara aga, ebe o doro anya na ị na-echebara ụzọ 4-stroke nke ohere dị mfe, nke nchịkọta 16 nwere ike (ewepu efu site na ntụgharị uche), naanị 6 n'ime ndị a (37,5 , XNUMX%) mepụtara nguzozi zuru oke.
Tupu ịga n'ihu na-agụ, ana m akwado ka ị ghara igwu egwu egwuregwu sọftụwia, n'ihi na a na-edozi ha iji mee ka onye ọkpụkpọ ahụ tufuo, ha bụ igwe oghere ma yabụ atụmatụ ọ bụla bụ ihe efu.
Mmeri na roulette: chaatị nke 6
Roulette Trends Hunter, ugbu a na mbipute 4.0, na-enyocha ọdịiche nke ohere 6 na-emegide, atọ bụ kpochapụwo Red / Black, Ọbụna / Odd, Manque / Passe, ebe ndị ọzọ 3 bụ mpaghara, n'ihi na ha na-echebara ndokwa nke nọmba na roulette iji iji gbochie usoro ọ bụla nke croupier nwere ike ịmalite.
Akụkụ ọzọ nke ohere 6 niile bụ na enweghị ike ịbawanye ha, ebe mmadụ nwere nọmba iri na itoolu (ekele maka ntinye nke efu), megide 19 fọdụrụnụ nke ohere ọzọ, mana ka anyị hụ ha n'ụzọ zuru ezu:
1.Chance V / L. = Agbata obi - Far (Agbata obi: ọnụ ọgụgụ dị nnọọ arahụ + 9 n'akụkụ aka nri / aka ekpe nke otu; Ebe: 18 fọdụrụ nọmba nke wheel).
2.Chance A / B = Elu - Ala (Elu: efu na 9 n'akụkụ aka nri / aka ekpe nke otu; Obere: nọmba 18 fọdụrụnụ nke wiil ahụ).
3.Chance D / S. = Aka nri - Aka ekpe (Aka nri: site na 0 ruo 10 gụnyere; aka ekpe: nọmba 18 fọdụrụnụ nke wiil ahụ).
4.Chance N / R. = Black - Red (Black: niile nwa nọmba na efu; Red: niile red nọmba 18);
5.Chance P / D. = Even - Odd (Ọbụnadị: ọnụọgụ na nọmba efu; Odd: ọnụọgụ niile iri abụọ na asatọ);
6.Chance M / P = Manque - Passe (Manque: niile manque nọmba na efu; Passe: niile 18 ngafe nọmba).
Mmeri na roulette: igbochi usoro
Na ileba anya mbu ya nwere ike iyi ihe ojoo, ma n'eziokwu, chee na anyi na-enyocha 6 Ohere nke roulette ịghọta nke na-emepụta nnukwu oghere ị ga-egwu maka (ma ọ bụ megide ma ọ bụrụ na ịchọrọ) nke ọdịiche a.
Naanị ịmalite ịbanye nọmba n'otu n'otu, ebe ha pụtara na roulette anyị na-ele.
Iji tinye ya, dị nnọọ pịa kapeeti na akụkụ ala nke usoro ihe omume ahụ ma nọmba ahụ ga-abanye na kọlụm nkwụsị na aka ekpe.
Cheta: ọ bụrụ na ụfọdụ ọrụ nke Roulette Trends Hunter adịghị edozi ozugbo, naanị tinye akụ òké ahụ na bọtịnụ ahụ na ozi ga-apụta na nkọwa nke ọrụ egwuregwu kwekọrọ.
Site na ịga na panel Dechapụ eserese ị ga-ahụ echiche zuru oke nke 6 ihe osise roulette, niile dị mfe iche iche maka agba dị iche iche, kwekọrọ n'ụzọ kwekọrọ na ohere dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso naanị ohere nke 3, na-ahọrọ ndị ọzọ atọ site na ịpị na igbe nlele kwekọrọ, eserese ahụ ga-adịkarị obere.
Mpịakọta abụọ na-acha uhie uhie nke na-egbutu eserese ahụ na-egosi na 'ọdịiche a na-atụ anya ya' dabere na ọnụọgụ nke edere, ebe ngalaba "F + ọdịiche" na-egosi uru nke 'ọdịiche kachasị' a tụrụ anya maka ọnya ntụgharị.
Na panel Jụọ Alert e Akụkọ Alert ọ ga-ekwe omume ịtọ njikere maka mgbe oke dị n'etiti ọdịiche dị ugbu a na ọnụọgụgụ ọtụtụ ugboro dabere na ọnụọgụ nke ntụgharị, gafere uru ahọpụtara (njikere).
Na-emeri na Roulette: Onye na-emeri Chance
N'aka nri nke Roulette Trends Hunter chọta ya Ohere igwekota, otu nhọrọ nke na - egbochi naanị ọnụọgụ "n'otu" n'etiti 2 ma ọ bụ karịa ohere ị na - enyocha.
Gịnị bụ ọrụ a? Ọ bụrụ na ohere abụọ ma ọ bụ karịa na-ewepụta ọdịiche ahụ n'otu oge, ịnwere ike ịkụ nzọ naanị ọnụọgụ "jikọrọ ọnụ" na ohere ndị a karịa ọnụọgụ 18 ma ọ bụ 19 niile, n'ụzọ dị otú a ọbụlagodi mkpụrụ nke otu gbaa meriri na-adị elu!
Na ekpe nke usoro ihe omume, na ala, ị ga-ahụ panel Ọdịdị Ka Mma, ekele nke, mgbe nhazi ngwa ngwa nke anyị ga-atụle mgbe e mesịrị, ọ ga-ekwe omume ịtinye ọnụ ọgụgụ niile ịchọrọ na-akpaghị aka site na iji otu ịpị.
Ka anyị kwuo na ndị a bụ otu ọrụ dị ugbu a na ngwanrọ ► Roulette Turbo Clicker, nke ị nwere ike ịchọta ebe a na katalọgụ sọftụwia site na ThatsLuck.
Imeri na Roulette na ụdị eserese: Ejiri Ebube
Iji nwetakwuo nkwalite ahụmịhe egwuregwu, etinyere m nke a Ejiri Ebube, nke ị nwere ike ịhụ ebe ọnụọgụ nọmba ahụ dị na wiilị roulette, n'ụzọ dị ka iji mee ka usoro ikpeazụ nke ịtụba bụrụ ihe na-atọ ụtọ, mgbe bọọlụ malitere ịmalite elu n'etiti igbe ahụ tupu ọ kwụsị ọsọ ya na nọmba mmeri.
N'ezie, ị nwekwara ike ikpebi igwu egwu maka nkwụsị nke a ihe omume roulettesite na ịhọrọ ihe ahụ Ewezuga maka nzaghachi nlele na site na ịpị igodo dị iche iche maka ịkụ nzọ blanket S o E ugbu a na panel Ọdịdị Ka Mma, ebe ị nwekwara ike ịhọrọ ọnụ ọgụgụ nke nkeji kwa otu nọmba ị na-aga ịkụ nzọ.
Imeri na Roulette na ụdị eserese: Trend Nyochaa
Na panel Trend Nyochaa ọ ga - ekwe omume, mgbe ịpịrị otu mfe, ilele eserese 6 niile n’otu oge, ọbụlagodi ohere ndị ahụ ewepụrụ na pịnye ndị isi (Scrap Graph).
Site na ịpị na eserese ọ bụla, ị ga-enwe ike ịlele otu mbugharị zuru ezu nke otu ohere na-abụghị ya, mgbe niile na ikwu na nkezi akwụkwọ ọdịiche (na-acha uhie uhie ilu).
Nke a ga - enyere gị aka inwe nkọwa dị mkpa nke ohere ọ bụla na - amalite igosi usoro dị elu karịa ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, na ndabere nke onyonyo gara aga, enwere m ike ịhọrọ ohere nke eserese akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (nke abụọ na etiti elu) na nke nke eserese na-acha anụnụ anụnụ, na-amalite ịkụ nzọ na ọnụọgụ nke ohere abụọ ahụ gosipụtara jikọrọ (ekele maka Ngwakọta Chance).
Imeri na eserese di egwu: Kapeeti kechioma
Maka ndị dị ka m na-ahọrọ ka njikọta nke Ohere igwekota, ebe ọ bụ na na nke a enweghị ọtụtụ nọmba nzọ, ọ nwere ike ịbụ oke iji hazie ma jiri Speed ​​Better, ya mere na panel Kapeeti kechioma anyị ga-enwe ike iji anya nke uche hụ ndokwa ahụ na kapeeti nke ọnụ ọgụgụ zuru ezu (Kechioma Ebu) nzọ na Ya mere, na-eme nzọ na aka, na a ngwa ngwa na kensinammuo ụzọ.
Imeri na Roulette na chaatị: Ọdịdị Ka Mma
Ikpeazụ panel nke software metụtara nhazi nke Ọdịdị Ka Mma nke na-agbaso otu nhazi dịka usoro ihe omume ahụ ►Roulette Turbo Clicker.
Maka akụkụ a, m na-ezo aka n'ịgụ akwụkwọ metụtara ya mgbe niile ThatsLuck, ebe ị ga - achọta nkọwa niile na nhọrọ a ngwa ngwa na karịa ihe niile dabara adaba, o doro anya na a na - aghọta ya na nhazi nke Speed ​​Better ga - emerịrị naanị otu ugboro, n’oge eji mmemme mbụ na usoro ntanetị ọhụrụ.
Ndụmọdụ Ndị Bara Uru: Roulette Trends Hunter ndị a, ma ọ bụ kama, gbalịa soro i -emekarị site na ruleti ị na-nsuso, e nweghị nkwa ọ bụla na omume agaghị akwụsị ma ọ bụ tụgharịa dịka ịmalitere ịtụ ya.
N'ihi ya, m na-adụ gị ọdụ ka ị tụlee egwuregwu 'kụrụ na ọsọ', nke ahụ bụ obere gbaa, mana ezubere nke ọma.
Onwe m enweela afọ ojuju magburu onwe ya na-egwu nọmba 8/9 nke na-eme site na ịgafe nke ohere 2 n'otu oge, na-eji ọganihu na-emeri mmeri na ebumnuche nke mmeri nke 3 na-esote nzọ wee kụrụ 1/4/16 iberibe kwa otu. , nke bụrụ na mmeri sụgharịrị ịbụ mmeri zuru oke, na mmeri nke atọ meriri, nke ọma 576 nkeji!
Likemasị gị Roulette Trends Hunter? Budata ya site na njikọ dị n'okpuru ma echekwaghị ohere ị ga-eji emelitere na akwụkwọ anyị, denye aha na ►Youtube ọwa, ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na ificationsma Ọkwa na ị ga-asian ke ozugbo banyere niile software ozi ọma nke ThatsLuck.
Nbudata Nbudata	RTHunter.zip - 2 MB